अष्ट्रेलिया विशेषः ठेगाना परिवर्तन गर्दा इमिग्रेशन डिपार्ट्मेन्ट्लाई खबर गर्नुपर्छ र ?
म सन् २०१३ मा विद्यार्थीको रूपमा अस्ट्रेलिया आएको हुँ र अहिलेसम्म पनि विद्यार्थी नै छु । यस बीचमा मैले तीन पटक ठेगाना परिवर्तन गरिसकें । के हरेक पटक ठेगाना परिवर्तन गर्दा इमिग्रेशन डिपार्ट्मेन्ट्लाई खबर गर्नुपर्छ र ?
पर्दैन । तर तपाईंले आफ्नो ठेगाना परिवर्तन भएको सात दिनभित्र आफू अध्ययनरत रहेको शैक्षिक संस्थालाई भने नयाँ ठेगाना उपलब्ध गराउनुपर्छ । हेर्दा सामान्य लागे पनि यसमा गरिने सानो लापरवाहीले ठूलो असर भोग्ने विद्यार्थीहरू धेरै छन् । तपाईंको शैक्षिक संस्थामा तपाईंको ठेगाना अद्यावधिक गरिएको छैन भने उसले तपाईंलाई पुरानै ठेगानामा पत्राचार गरिरहन्छ, जुन तपाईंको हातमा पर्दैन । कुनै गम्भीर विषय जस्तै, तपाईंले शुल्क नतिर्नुभएको, तपाईंको हाजिरी सन्तोषजनक नभएको जस्ता सन्दर्भमा तपाईंलाई पठाइएको पत्रको बारेमा तपाईंले आफ्नो शैक्षिक संस्थालाई समयमै सन्तोषजनक जवाफ दिनुभएन भने तपाईंको भिसा खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ । त्यसैले ठेगाना परिवर्तन हुनासाथ आफ्नो शैक्षिक संस्थालाई नयाँ ठेगाना उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
के मैले आफ्नो शैक्षिक संस्था परिवर्तन गरेँ भने त्यसको जानकारी आफूले छाडेको संस्थालाई पनि दिनुपर्दछ?
यदि पढाइको पूरा अवधि नबित्दै तपाईंले आफ्नो शैक्षिक संस्था परिवर्तन गर्नुभयो भने सोको जानकारी ७ दिनभित्र आफ्नो पूरानो शैक्षिक संस्थालाई पनि दिनुपर्दछ ।